Moe Kai: နိုင်ငံတော် အလံ
ဒီလိုပဲ အားကစားပွဲတွေ သွားရင် နိုင်ငံတော် သီချင်းဆိုလို. နိုင်ငံတနိုင်ငံ အလံတက်သွားတိုင်း ကိုယ့်မွေးရပ်မြေ အမိမြန်မာ နိုင်ငံတော်ကို မကြာခဏ သတိရမိပါတယ်။ ၁၉၉၅ - ၁၉၉၆ လောက်တုန်းက သန်းတိုးအောင်တို.၊ မျိုးလှိုင်ဝင်းတို. အရှေ.တောင် အာရှ ပွဲကန်တုန်းက သဲသဲလှုပ် အားပေးခဲ့တာကိုလဲ မကြာခဏ သတိရမိပါတယ်။ သူတို. ရှုံးတော့ ကိုယ့်မှာ ငိုရသေး။ နောက်နေ. ကျောင်းမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ. ပြန်ပြော။ ဒီဒိုင်လူကြီး မတရားဘူးပေါ.၊ ကိုယ်ရှုံးတာဆိုတော့။
ဒီလိုပဲ ပြန်တွေးရင်း ဒို.မြန်မာနိုင်ငံတော်က အားကစားသမားတွေ နိုင်ငံတကာ အားကစား ပွဲတွေမှာ အောင်မြင်မှုတွေနဲ. တွေ.ရရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို. စိတ်ကူးတွေယဉ်လို.။ ကိုယ့်နိုင်ငံတော် အလံကြီးက တလူလူလွင့်လို.ပေါ့ စိတ်းကူးထဲမှာ မြင်ကြည့်နေတာ။ စိတ်ကူးယဉ်နဲ. တကယ်. ဘဝဟာ တခြားစီဆိုသလို၊ သုဝဏ္ဏကွင်းမှာ ပရိသတ်မှ ရေသန်.ဘူးတွေ၊ ကျောက်ခဲတွေနဲ. ပေါက်တဲ့ သတင်း ဖတ်လိုက်ရတော့၊ ကျမဟာ အိပ်မက်မှ လန်.နိုးလာတဲ့ သူတယောက်လိုပါပဲ။ ဒြို့မန်မာတွေ စည်းကမ်း ရှိဖို. တိုးတက်ဖို. ဆိုတာကတော့ တကယ့်ကို အများကြီးကို လိုအပ်နေပါသေးတယ်။
၃ ရောင်အလံ တချို.ရဲ. ဥပမာတချို. ကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။